Vot : Manohana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Resy lahatra amin’ny fanohanana an-dRamatoa lalao Ravalomanana amin’ny firotsahany ho fidiana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay izao ny zanak’avaratra. Nivoitra izany nandritra ny fandalovan’ny fikambanana vondron’olon-tsotra(Vot) izay manohana any Filoha Marc Ravalomanana sy mitaky ny ara-dalàna tany Antsiranana ny Alarobia 17 aprily teo. Mahatsapa ny zanaky ny faritany Antsiranana fa ny fahalanian’i Lalao Ravalomanana hitondra ny firenena Malagasy no hitondra vahaolana amin’izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka Malagasy izao. Mijoro ankehitriny ireo olon-tsotra any an-toerana manamafy ny fanohanany an-dRamatoa Lalao Ravalomanana sy mitaky ny fampodiana ny filoha Ravalomanana Marc. Niditra mivantana an-telefaonina tamin’io fihaonana ny vot nasionaly tamin’ny zanak’avaratra ny Filoha Marc Ravalomanana.
Nanazava an-tsipiriany ny antony nahatonga an-dRamatoa Lalao Ravalomanana ho kandida fioloham-pirenena izy. Inoana hoy izy fa 1er tour dia vita. Nampahery ny vahoaka any Antsiranana amin’ny tolona ho famerenana ny ara-dalàna ny tenany ary indrindra eo amin’ny fiatrehana ny fifidianana ary niantso sy nanamafy firaisankina. Ankoatra izay dia nampita hafatra sy toromarika ho an’ny vahoaka ihany koa. Ny mpandrindra nasionaly ny Vot Sarah Zoé kosa dia nanambara fa fotoana izao hamondronana ny hery entina hampahomby ny tolona. Efa mazava izao hoy izy fa Ramatoa Lalao Ravalomanana no kandidantsika amin’ny fifidianana filoham-pirenena ka hanao ny ezaka rehetra isika amin’ny fampandaniana azy. Vavolombelona ny mpiasa ny bainga voavadika. Fantatsika ny zavabitany tamin’ny fitantanany ny orin’asa Tiko. Tsy mampitovy ny fitantanana orin’asa amin’ny fitantanana firenena sanatria fa ny tian-kambara hoy izy dia hoe efa manana ny fahaiza-mitantana sy traikefa amin’ny fampahombiazana amin’ny zavatra ataony Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny Ray amandreny Filoham-boninahitriny Vot Andriamatoa Rasolofoniaina Darsot Gilbert . Nambarany fa hanohana tsy misy fepetra an-dRamatoa Lalao Ravalomanana satria izay no heverina hoy izy ireo fa hamerina indray ireo asa fampandrosoana rehetra izay nataon’ny filoha Ravalomanana tany amin’iny tapany avaratry ny nosy iny. Mitohy ny hetsika fitetezam-paritra ataony ekipany Vot ka ny faritra SAVA no hanohizany ny hetsika fanentanana sy fanabehazana ny mpiarambelona mba tsy hiraviravy tanana aminy fandraisana andraikitra aminy raharaham-pirenena hitsinjovana ny taranaka faramandimby sy fanarenam-pirenena .
Auteur Solo Razafy*Publié le 19 avril 2013 19 avril 2013 Catégories Politique
9 pensées sur “Vot : Manohana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana”
Misaotra anareo fa tsy nanao ririnin-dasa tsy tsaroana ny soa vitan’i Dada ianareo
fa aza mbola maika fa mbola mandeha ny tantara tompoko isany, mety hisy fiovana tampoka
satria mbola misy fitakiana maro2 ihany vao ho tonga @’izany isika, dia tsy takona hafenina koa fa eo dia eo ny sakana
maro samihafa, amiko mbola tsy azo hibitabitahana izany fa mila FANDINIANA SY FAHATSAPANA lalina ny ANTONY sy
ny TETIKA REHETRA AHATONGAVANA @’Izany.
19 avril 2013 à 20 h 49 min
Tena marina, sao dia tonga amin’ilay fitenenana hoe « aza mandihy tsy afa-tsavony » ! Mbola mamofona savony gasy beu ??
Tandremo ihany ry zareo vehivavy !!! Hi hi hi !
izaho aloha dia mbola kely finoana ary mbola tsy any mihintsy ny heritreritro e!!
Zarako dia zarako aza fa saingy mbola tsy dia azoko antoka loatra ka aleo aloha hilamina.
Jereo itony ry vakitampona koh!!tadiaviny ho hangalarina sahady ny vaton’i dada,
anazy hono ny » TIM??? » tena efa midelira !!!tsy zakan’ny lohany ilay sambo vaky
mba natsontsoiny taloha ireny.
Ary toa tsy voalaza hoe nandray fitenenana tao koa i Guy Rivo ? Fa ahoana?
« Mandihy tsy afa-tsavony » ? hehehe… tsy ratsy ilay jeu de mot.
I Guy rivoa nandray fitenena taiza ?. tsy eo @ ity lahantsorata ity aloha izany. Fa mety vaovao avy @ toeran-kafa.
Tena hisaorana ny VOT izay hita fa tena mitolona sy nanao hetsika matetika mba ho fampiharana ny sori-dalana. Na dia nahilik’ireo mpitarika te ho filoha tao @ MAGRO aza ry zareo dia izao hita porofo izai fa tena zanak’i Dada no sady madio fo. Tsy adala akory ny filoha Ravalomanana niditra an-telefonina avy @ alalan-dry zareo. Ary tsy voa voalohany izao fa efa im-betsaka. Midika izany fa mankato ny tolona ataon-dry zareo ny filoha.
Izaho manokana aloha dia tena midera sy maka tahaka @ ireto VOT ireto. Torak’izany koa ny VAMI (Vahoaka MIray) izay tena mitovy fipetraka @ VOT. Tena mitolona fa tsy lany andro @ kabary sy ny fivavahana, ary tena manao hetsika etsy sy eroa.
Manohana hatr@ farany ny tolona sy ny filatsahan’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana hatr@ farany. Fotoana izao tokony hifanantona daholo ireo mpanohana ny ara-dalana sy ny filoha Marc Ravalomanana.
20 avril 2013 à 13 h 57 min
Voalazan’ny Radio Rindra io Guy Rivo io.
Amiko manokana dia mpitolona tia an’i dada tokoa ny VOT, tsy azoko lavina izany.
Ny indro kely dia tia mametsifetsy sa mangalatra ny volan’ny mpitolona i Sarah hatrizay ka nahatonga azy tsy nifanaratsaina intsony amin’ny GTT rehetra ao Frantsa. Na izaho izao aza efa voa indroa na intelo. Izy kosa aloha dia tena mahay miresaka, fa ny miseho azy ho goavana aza nataony ripadripakany poketrany
Tsy azo ahilika anefa izy satria tena zanak’i dada kosa an. Asa na tsara izany na ratsy. Samy manana ny kilemany ny rehetra.
Lazalazao — aza mba azon’io ianao fa tonga dia mitsivalana ny porte feuille. Misy hivonto orona be amiko izao fa tsy ahoako.
Be mihitsy no nanao bizna tamin’ity tolona ity. Ary ny tena mampalahelo dia ny milaza azy ho mpitolona koa no tena mirona amin’izany. Tsy efa maro izao no efa nahavita trano goavana nandritra izay 4 taona izay??
Raha ny sitrapon’ny ankamaroan’ny malagasy dia aleo ho amin’izao « samy manao, samy mihinana » izao. Olona tsy tan-dalàna sy tsy tia lalana mianakavy. Ny kindranoandrano ihany no ady eo.
Précédent Article précédent : Rencontre organisée par la FFKM: tous réclament la présence obligatoire du président Ravalomanana
Suivant Article suivant : RAVALOMANANA Lalao : « 1er tour de vita »